BOSSASO, Puntland- Madaxweyne Cabdiweli Maxamad Cali Gaas oo ku sugnaa mudooyinkii ugu dambeeyey magalada Bosaso ayaa wararka sheegayaan inuu u safrey degaanada Barriga halka soo ay u naq guureem dadka abaaruhu saameynta ku yeesheen.
Gaas oo habeenkii xalay ku sugnaa tuulada Xiriiro ee hoostimaada gobolka Karkaar ayaa wararka maanta ka imaanaya sheegayaan inuu u gudbey degmada Xaafuun gobolka Barri.
Raashinka Madaxweynaha Puntland u qaadey dadka u guurey degaankaas ayaa sida warsidaha Garowe Online fahansan yahay waxaa ku deeqey intiisa badan ganacsatada ku sugan magaalada Bossaso.
Wararka ayaa sheegaya in ganactada ku deeqdey raashin kala duwan oo gaaraya 2500 Kiish halka dowlada Puntland ka bixisay cashuurta laga qaado shacabka bixisey 500 kiish.
Madaxweynaha Puntland oo maalmihii ugu dambeeyey shirar kula jirey ganacsatada ayaa codsigaan u gudbiyey madaama ay u sahleyso in safarkaan ugu ambabaxo degaanada Barriga.
GAROWEONLINE kala soco wararka la xiriirka safarka Madaxweynaha Puntland.
MUQDISHU, Somalia- Hogaamiyaasha ka qeybgalaysa Shirka Madasha Wadatashiga Qaranka ee ka socda Muqdishu, ayaa magacaabay Gudi loogu magac-daray "Gudiga Qaranka ee Gurmadka Gargaarka Abaaraha", kaasoo ka kooban Sagaal xubnood oo matalaya DFS iyo maamul goboleedyada.< ...